Plan Emergence Madagascar Hampiasaina mandritra ny 5 taona
Fitsarana ireo dosie mafana ao amin’ny PAC Ho hentitra ny fanaraha-maso sy ny fitandroana ny filaminana
Maro ireo dosie mafampana hotsaraina eo anivon’ny PAC na “Pôle Anti-Corruption” tsy ho ela.
Fambolena “Algue” ataon’ny Sinoa Mampihena ny vokatra amin’ny jono any Vohemar
Ny minisitry ny jono teo aloha Augustin Andriamananoro no nanao sonia ny fahazoan-dalàna manao fikarohana sy andrana fambolena Algue rouge ho an’ireo sinoa tany Vohemar.
Fampidirana vokatra avy any ivelany Maro ny fepetra raisina hiarovana ny orinasa Malagasy
Nitondra fampahafantarana mahakasika ireo fandraisana fepetra fiarovana mahakasika ny vokatra Malagasy amin’ireo fifanakalozana ara-barotra ny rafitra mpanao fanadihadiana momba ny lalàn’ny fifaninanana ara-barotra (ANMCC) omaly tetsy amin’ny foibeny Antanimena.
Fampandrosoana holovain-jafy Lalana iray hahatrarana ny tanjona ny antenimieram-pirenena
Tonga niarahaba tamin’ny fomba ofisialy an’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine tamin’ny nahavoafidy azy tamin’ny fifidianana tamin’izany ny solotena maharitry ny Firenena Mikambana eto Madagasikara Ramatoa Violet Kakyomya.
Fitantanana raharaham-panjakana Mila fanaraha-maso goavana
Hiditra amin`ny fandaniana ny tetibolam-panjakana lasitra ho an`ny taona 2020. Mijanona ho 2020 ny PMO saingy mifanaraka amin`izay ve ny tetibolam-panjakana ?
Politika ankapoben`ny fanjakana Tokony hampafantarina amin`ny vahoaka eny ifotony
Araka ny andininy faha-99 amin`ny lalàmpanorenana dia iray volana farafahatarany aorian`ny fanendrena ny praiminisitra dia tsy maintsy mitondra ny “Programme de mise en oeuvre” (PMO) eo anivon`ny politika ankapoben`ny fanjakana (PGE)
Sehatra fambolena Tsy manana fitaovam-pamokarana ny tantsaha
Miantoka ny fahombiazan’ny 75% ny voka-pambolena ny fampiasana ny fitaovam-pamokarana manara-penitra.
Nisy ny atrikasa fifanakalozan-kevitra nokarakarain’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola omaly teny amin’ny Carlton Anosy izay haharitra 2 andro.
Tanjona ny hametrahana paikady vaovao mifanaraka amin’ny filan’ny firenena izay entina hampandrosoana an’i Madagasikara. Napetraka, araka izany, ny Plan Emergence Madagascar (PEM) izay famadihana ny vinan’ny filoham-pirenena ho asa mivaingana. Nofantarina sy nitadiavana vahaolana amin’ity atrikasa ity ireo sakana tsy nampandroso ny firenena hatramin’izay. Ity PEM ity no nanoloana ny Drafitra Nasionaly ho an’ny Fampandrosoana (PND) ary ampiasaina mandritra ny 5 taona. Zavatra maro no mbola mila dinihina mialoha ny tena handrafetana ity drafitra vaovao ity. Nanambara ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, Richard Randriamandranto fa tsy ho sarotra ny fanatanterahana io PEM io ary havoaka amin’ny volana jona.